"Sleeves Up" ho an'ny fanokafana indray ny fizahan-tany any Bali amin'ny alàlan'ny fanaovana vaksiny ny tsirairay
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » "Sleeves Up" ho an'ny fanokafana indray ny fizahan-tany any Bali amin'ny alàlan'ny fanaovana vaksiny ny rehetra
"Sleeves Up" ho an'ny fanokafana indray ny fizahan-tany any Bali amin'ny alàlan'ny fanaovana vaksiny ny rehetra
Foana ny trano fandraisam-bahiny sy ny torapasika, ny tsy fananan'asa no mahazatra. Mijaly ny olona any Bali. Ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany no làlan-kizorana ho an'ity Nosy Indoneziana ity ary efa nambara ny drafitra iray ary manerana ny vondrom-piarahamonina izy io, manana ny fanohanana ilaina hanatanterahana izany.
Ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany dia nijanona tao amin'ny Island of the Gods.
Ny Bali Hotel Association dia miara-miasa amin'ny governemanta amin'ny fanomezana antoka ny programa fanaovana vaksiny goavambe ho an'ny mpiasa amin'ny sehatry ny mpitsidika sy ny mponina any Bali.
Sleeve Up dia fandraisana andraikitra hanokatra indray ny Nosy Hindoa Bali ho an'ny mpitsidika indray ary hametraka lalantsara fizahan-tany COVID-19 ao amin'ilay nosy.
Tamin'ny fanambarana an-gazety nataon'ny Bali Hotels Association androany dia nanohana tanteraka ny programa vaksinin'ny governemanta Indonezia miaraka amin'ny Fampielezana #sleeveup any Bali no fiainako. The Bali Hotels Association dia namporisika sy nanohana ireo hotely fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny nisoratra anarana ho toerana fanaovana vaksiny.
Miara-miasa amin'izany isika rehetra, ny hafatra izay mbola tianay hatrany halefa.
Ity fanentanana farany ity dia antsoina hoe "Sleeve Up." Hetsika eraky ny fiaraha-monina ity hampirisihana ny rehetra hanao vaksiny. Simona Chimenti, talen'ny Fifandraisan'ny haino aman-jery momba ny varotra BHA dia nilaza fa “manohy manohana ny drafitry ny governemanta nasionaly sy ny eo an-toerana izahay mikasika ny fanatratrarana ny tanjon'ny vaksininy. Ny governoran'i Bali sy ny fitondrany dia mikendry ny hanao vaksiny olona farafahakeliny 2.8 tapitrisa ao anatin'ny 100 andro, satria mitady hanatratra farafahakeliny 70 isan-jaton'ny mponina ao amin'ny faritany ny tompon'andraikitra mba hahazoana tsimatimanota. Manakaiky ny 140,000 ny olona vita vaksiny hatreto, raha ny angom-baovao avy amin'ny governemanta provisialy, maherin'ny 44,000 amin'izy ireo no nahazo ny roa tamin'ireo takelaka roa nilaina hatramin'ny nanombohan'ny vaksiny nanao vaksiny olona tamin'ny tapaky ny volana janoary.
Ny programa fanaovana vaksiny faobe mikendry ny olona any Ubud, Nusa Dua, ary Sanur dia ampahany amin'ny fiomanana amin'ny mety hisokafan'ny faritany ny fizahan-tany vahiny amin'ny tapaky ny taona amin'ity taona ity.
Ny fametrahana ireo faritra maitso telo ireo dia ampahany amin'ny ezaka hanokafana ny fizahantany any Bali.
Ny manampahefana indoneziana koa dia manolotra “fandaharana amin'ny lalantsara fitetezam-paritra” miaraka amin'ny firenena maromaro, izay heverina ho mahomby amin'ny fisian'ny fiparitahan'ny virus corona, manana tahan'ny vaksiny avo ary mety hanolotra tombony tambiny. eTurboNews vao nantsoina hoe Inminisitry ny fizahantany sy ny toekarena famoronana Sandiaga Uno ny minisitry ny sosialy betsaka indrindra.
Nilaza i Uno teo aloha - manome ohatra ny firenena toa an'i Netherlands, China, United Arab Emirates (UAE), ary Singapore.
Fantatry ny Bali fa ny fanaovana vaksiny dia ampahany manan-danja amin'ny zavatra ilaina amin'ny alàlan'ny protesta CHSE vaovao momba ny fahasalamana sy fiarovana.
Manohy mandrisika ny trano fandraisam-bahiny mpikamban'ny Bali Hotels Association izahay mba hanohana ny vaksiny ho ampahany amin'ny famaranana 'Ataovy daholo izany!' fomba fiasa.
Ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny ao Bali Association Association dia miantoka ny fiarovana sy ny fahasambaran'ny vahininy, ny mpiara-miombon'antoka ary ny mpiasa dia mijanona ho lohalaharana. Araka izany, ny hotely sy hotely mpikambana ao aminay dia nampihatra ny masonkarena fiarovana sy fiarovana araky ny baikon'ny governemanta sy ny fikambanana manerantany manerantany. Anisan'izany;
-Ny fitafiana sarontava sarontava afa-tsy rehefa misakafo sy misotro ary halavirana 1.5 metatra no tazonina
- Fanamarinana ny mari-pana
- Misasa tànana
- Fisoratana anarana miaraka amin'ny fomba fanarahan'ny governemanta.
Qatar Airways dia manitatra tamba-jotra amin'ny toeran-tsoa mihoatra ny 140 amin'ity fahavaratra ity
Manila dia nametra ny fahatongavan'ireo mpandeha fiaramanidina iraisam-pirenena ho 1,500 taorian'ny isa COVID
SITE sy Hilton dia miditra amin'ny fiaraha-miasa stratejika vaovao
11 ora lasa izay
Ny mpitondra ambony any Etazonia dia manentana ny Trano Fotsy hanokatra indray ny dia iraisam-pirenena
Vaovao momba ny fitsangatsanganana
NASA dia niampanga an'i Sina ho tsy nahavita fenitra tompon'andraikitra taorian'ny nianjeran'i Rocket tany akaikin'ny Maldives
Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika
TATO dia mandray an-tanana ny filohan'ny Antenimieram-pirenena
Vaovao momba ny dia any Thailandy
Skål International Thailand dia mandefa marketing any amin'ny toerana misy azy na eo aza ny fihenan'ny COVID
Ny isan'ny COVID-19 nasionalin'ny India dia tafakatra 22,662,575
Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika
Ny fizahan-tany any Jamaika dia miantso ny feon'ny firaisam-pirenena Karaiba hanoherana ny tsy fitoviana amin'ny vaksininy